Izindaba - I-HDMI Output 4K Zoom Vimba Imojuli yekhamera
I-View Sheen ithuthukileikhamera ye-zoom block ikakhulukazi i-UAV noma i-drone.
Uyini umehluko phakathiimojuli yekhamera ye-drone zoomkanye neikhamera ye-zoom blocknge-CCTV?
1. Ukuze unciphise ukubambezeleka kwevidiyo,1080p UAV block imojuli yekhameraifakwe njengezinga eliphezulu lozimele elingu-1080P@50fps/60fps.Lokhu kungakhethwa ngekhamera ye-CCTV.
2. Ukuze ihambisane nokudluliswa kwesithombe se-HDMI, ikhamera evinjiwe ye-UAV isekela ukuphuma kanyekanye kwenethiwekhi nevidiyo ye-HDMI.Ikhamera ye-CCTV ivamise ukuphumela ngaphandle kwenethiwekhi noma i-LVDS ephumayo.
3. Izixhumanisi zokulawula zihlukile.Ku-UAV, umyalo wokulawula uvame ukuthunyelwa kusuka phansi kuya kuphaneli yokulawula ye-gimbal.I-gimbal ilawula ikhamera ngembobo ye-serial.Ngakho-ke, ikhamera ye-UAV isebenzisa kuphela imbobo yochungechunge isebenzisa umthetho olandelwayo we-VISCA.Le port ye-serial isekela ukuthwebula, ividiyo neminye imiyalo eyakhelwe i-UAV ngokukhethekile.
Ekusetshenzisweni kwekhamera ye-CCTV, umyalo wokulawula uvame ukuthunyelwa kukhamera yokuvimba ngomyalo wenethiwekhi.Ikhamera isebenzisa izimbobo ezimbili ze-serial ukuxhumana ne-PTZ.Imbobo eyodwa ye-serial isebenzisa umthetho olandelwayo we-VISCA, enye isebenzisa umthetho olandelwayo we-PELCO.
4. Isakhiwo sihlukile.Ukuze kuncishiswe isisindo senguqulo ye-UAV, alikho igobolondo, kuphela ubakaki odingekayo osetshenziselwa ukulungisa ibhodi le-PCB.
Lonke uchungechunge luhlanganisaImojuli yokusondeza ye-drone engu-30x 2mp, Imojuli yokusondeza ye-drone engu-30x 4Kfuthiikhamera yezinzwa ezimbili(30x zoom module kanye 640*512 ikhamera ezishisayo)neminye imikhiqizo.
Sicela usithinte ukuze uthole imininingwane.
Isikhathi sokuthumela: Aug-12-2021
Ikhamera yokusondeza ende Ikhamera yokusondeza enkulu kakhulu 30x Zoom Camera Mdule Imojuli Yekhamera Yokusondeza Kwenethiwekhi imojuli yekhamera yokusondeza Ikhamera yezinga lokushisa